Sida loo shido Audio iyo Video laga soo qaado Linux ilaa Chromecast | Laga soo bilaabo Linux
Chromecasts Waxay noqoneysaa aaladda ugu isticmaalka badan ee u gudbisa TV-gayaga waxa lagu soo saaro kombuyuutarkayaga, mobilka ama xitaa biraawsarka Isticmaalayaasha Linux ma laha waxqabad asaasi ah oo noo ogolaanaya tuur Linux audio iyo muuqaal ah Chromecast, sidaa darteed waa inaan dooranaa codsiyada sida mkchromecast, taas oo noo ogolaaneysa inaan si fudud ugu gudbinno waxyaabaha aan dooneyno inaan ka daawano telefishankeena iyadoo la adeegsanayo qalabkan.
1 Waa maxay Chromecast?
2 Waa maxay mkchromecast?
3 Sidee loo rakibaa loona isticmaalaa mkchromecast?
4 Ka tuur Youtube-ka illaa Chromecast
Waa qalab HDMI ah oo la mid ah USB drive-ka ku xiran TV-ga si looga soo qabto calaamadda qalabka multimedia ee ku xiran shabakadda Wi-Fi. Qalabkan waxaan ku daawan karnaa waxyaabaha kala duwanaanta badan ee laga soo diro kombiyuutarradeena, taleefannada gacanta iyo xitaa biraawsarka internetka.
Waa maxay mkchromecast?
Waa aalad furan oo furan, kuna qoran Python oo maxaad isticmaashaa node.js, ffmpego avconv si loo helo codka iyo muuqaalka laga soo duubay Linux ilaa Chromecast.
mkchromecast waxay u dirtaa multimedia-keena Chromecast iyadoo aan luminin tayada maqalka iyo muuqaalka, sidoo kale waxay la jaanqaadi kartaa baahinno badan, tayo sare leh 24-bit / 96kHz qaraar maqal ah, toos uga gudbinta YouTube-ka, iyo waxyaabo kale oo ku jira moodooyinka casriga ee Chromecast.
Qalabku wuxuu ku qalabeysan yahay guddi adeegsi oo aad u fiican, kaas oo lagu soo bandhigo sanduuqayaga. Sidoo kale, rakibaadda mkchromecast waa wax toos ah oo ku saabsan dhammaan Linux distros.
Sidee loo rakibaa loona isticmaalaa mkchromecast?
Mid kasta oo ka mid ah 'Linux distro' waxaan si toos ah ugu rakibi karnaa mkchromecast koodhkeeda asalka ah ee lagu martigeliyey Github, tan awgeed waa inaan ku dhaqaaqnaa tallaabooyinka soo socda:
Clone keydka rasmiga ah ee aaladda, ama, ku guuldareysiga taas, ka soo dejiso nooca xasilloon ee dalabka Halkan.
Waxaan aadeynaa galka cusub ee cloned oo waxaan u dhaqaaqeynaa inaanu fulino dhuumaha rakibida faylka requirements.txt kaas oo ka kooban dhammaan ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka u ah qalabku inuu si sax ah u shaqeeyo (xaaladaha qaarkood qalabka waa in lala ordo sudo):
Debia, Ubuntu iyo adeegsadayaasha soosaara ayaa si toos ah qalabka uga soo dejin kara meelaha rasmiga ah ee lagu keydiyo, kaliya amarka soo socda ka soo qaad qunsulka:
Dhinacooda, isticmaaleyaasha Arch Linux iyo waxyaabaha la midka ah waxay isticmaali karaan xirmada laga heli karo keydka AUR
Waxaan ku arki karnaa habdhaqanka iyo adeegsiga codsigan si faahfaahsan hadiyadaha soo socda ee ay u qaybiyeen kooxda horumariyaha. Waxaan sidoo kale ka arki karnaa casharrada isticmaalka rasmiga ah adeegsiga halkan.
Ka tuur Youtube-ka illaa Chromecast
Gaar ahaan wax aan ka jeclahay codsigan ayaa ah inaan si toos ah uga daawan karno fiidiyowga YouTube-ka kontoroolka illaa chromecast-keena, tan waa inaan ku fulinnaa amarka soo socda:
Shaki la'aan, qalab noo oggolaan doona inaan u dirno multimedia-keena Linux illaa Chromecast si fudud, dhakhso leh oo aan tayada lumin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sida loo shido Audio iyo Video ka Linux ilaa Chromecast
Waxaan aaladdan u adeegsadaa chromecast, waxay u oggolaaneysaa dhowr horumar oo kan ka badan. waxaad diri kartaa feyl kasta oo fiidiyoow ah
Castnow waxaa loogu talagalay oo kaliya dirista feylasha fiidiyowga, laakiin looguma diri karo codka waqtiga dhabta ah.
Ku jawaab Muammar
Great @Lagarto, mahadsanid.
Multimedia waa mid aan isbeddel ku imaan karin jamac ahaan. Weligaa ha dhihin "multimedia."
Jawaab Carlos Moreno
Aad baad ugu mahadsantahay cadeyntaada qaaliga, waan saxay waanan kordhiyay ereygayga adoo ku tixgelinaya tixgelintaada
Waxaan raadinayay wax la mid ah maalmo. Mahadsanid !!
Xiiso leh Waan isku dayi doonaa, shaki la'aan.
Su’aashu waxay tahay sidee loo qaabeeyaa Firewall-ka. Loogu talagalay Chrome, tusaale ahaan, kuma guuleysan in aan qaabeeyo oo kaliya waxay soo dirtaa waxyaabaha (laga soo qaado YouTube ama waxkastoo) oo leh naafada naafada.
Ma jiraa qof garanaya sida loo qaabeeyo?
Jawaab Senhor Paquito
Haddii aad isticmaaleyso Ubuntu, halkan waxaad ka akhrisan kartaa sida https://github.com/muammar/mkchromecast/wiki/FAQ#i-am-using-ubuntu-firewall-how-can-i-use-mkchromecast-with-it.
Xaqiiqdii, waxaan isticmaalaa Ubuntu (waan ka xumahay, laakiin ma aanan fahmin inaan sidaas dhaho) iyo, wixii hadda ka dambeeya, sidoo kale waxaan isticmaali karaa Chromecast aniga oo aan ka maarmin Firewall-ka.
Mar labaad ayaan ka jawaabayaa, inaan kuu sheego ka dib markii aan furay dekedda 5000, waxaan dib u bilaabay haddiiba ay dhacdo, waxaan furay Chrome waxaanan arkay Chromecast, waana sababta aan ugu maleeyay in dekeddu ay ansax ku tahay heerka nidaamka iyo in codsi kasta uu hal jeer u diri karo Chromecast hal mar. furid
Laakiin markii xigtay ee aan isku dayay mar dambe kuma xirmin. Waxay u muuqataa in markii ugu horeysay ee gidaar-yarku uu qaatay wakhti yar in la bilaabo, waana taas sababta ay u shaqeysay markii ugu horeysay.
Marka waan fahamsanahay in dekedda 5000 kaliya loogu talagalay mkchromecast, sax?
Haa, waan ka xumahay. Waxaan u maleynayaa inaan qalad akhriyay. Laakiin aragti ahaan, waa inaysan dhibaato ka jirin haysashada gidaar-dhimista iyo adeegsiga 'chrom'. Ma aanan tijaabin, maxaa yeelay waxaan isticmaalaa Debian. Iyo haa, dekedda 5000 ayaa looga baahan yahay kaliya mkchromecast.
Waa la fahmay.
Marka laga hadlayo rakibaadda mkchromecast ee ka socota keydka rasmiga ah ee Ubuntu, waa in la ogaadaa in xirmada aysan ku jirin keydka Ubuntu 16.04. Wixii aan ku arkay, waxay umuuqataa in kaliya la heli karo sida Ubuntu 16.10.
iyo in gentoo distros ??
Anigu xal uma heli karo jiritaan la'aanta 'Sabayon Linux'.